Kunyange paine akati wandei akanakisa compact ultrabooks kunze uko, vazhinji venyu muchiri kuda malaptop ehukuru hwakazara nema skrini makuru uye simba rakaringana rekubata zvakanaka mabasa ezuva nezuva, mitoro yebasa nemitambo.
Nekudaro, ndine chokwadi chekuti haungataure kune yakazara-saizi laptop iyo yakatetepa uye yakapusa, chero bedzi ichiri kusangana nezvinodiwa uye inowira mukati meiyo chaiyo bhajeti.
Isu takaedza mazhinji emalaptop anowanikwa muzvitoro mazuva ano, emarudzi ese uye kubva kumarudzi ese, uye mune ino chinyorwa tichakuudza izvo zviri mumaonero edu akanakisa 14 uye 15-inch Ultra-anotakurika malaptop aunogona kutenga. .
Iwe unogona kupfuura nepose posvo yemufananidzo wakazara weizvo zviripo kunze uko, kana ingoverenga zvidimbu zvekufarira.
Iwe uchawana sarudzo yemayuniti mune yega yega, inokwana kugadzirisa zvese zvinodiwa uye zvinotarisirwa. Iwe zvakare uchawana zvinongedzo kune kwedu kwakadzama wongororo uye zvinongedzo kuenda kuAmazon mapeji, kwaunogona kuwana emushandisi-wongororo uye yakagadziridzwa kumisikidzwa / mitengo yemhando yega yega modhi.
Ramba uchifunga kuti zvimwe zvezvigadzirwa zvingangotarisa kunze kwebhajeti rako zvinogona kunge zvichitengesa zvishoma panguva yauri kuverenga chinyorwa, saka izvo zvinongedzo zvinofanirwa kutariswa.
Yakatetepa uye yakajeka ese anotenderera (multimedia) malaptop
Ichi chikamu chinosanganisira anotakurika ese-anotenderera malaptop ane echinyakare mafomu-maficha, makomputa ane emazuva ano maficha uye maficha, asi aine tarisiro pane yakatetepa-uye-mwenje fomu-chinhu.
Kune zvakawanda zvakanaka sarudzo uye ndosaka isu takanyora edu ekurumbidza pazasi, aine mashoma mashoma maitiro avo akakosha uye zvinongedzo kune edu akazara ongororo uye zvinyorwa kwaunogona kuwana zvimwe nezvazvo.
Kana iwe usiri kufarira bhuku risingachinjiki, isu tichavhara emhando yepamusoro-mitambo yemitambo, anotendeuka uye mabhuku emabhajeti mune zvimwe zvikamu.
Pakati pezvakawanda 14-inch multimedia misiyano, izvi zviri pane edu zvinyorwa (zvakarairwa nearufabheti):
Acer Swift 3 SF314-54 uye SF314-55 - ese-anotenderera, Core U Hardware, inosarudzika Nvidia MX150 kana MX150 Max-Q mifananidzo, IPS matte skrini ane madiki bezels, inokurumidza keyboard, 48 Wh mabhatiri, kubva ku1.35 kg / 3 lbs, inokwikwidza mutengo;
Asus Zenbook UX433 - ultracompact yese-yakatenderera, diki uye yakareruka kugadzirisa kwe yakakurumbira UX430 akateedzana, Core U Hardware, yakazara-simba Nvidia MX150 mifananidzo, IPS matte / touch skrini ine zvidiki bezels, 50 Wh bhatiri, kubva ku1.1 kg / 2.4 lbs, inokwikwidza mutengo;
Gigabyte Aero 14 - ine simba uye inodhura 14-incher, yakavakirwa paCore H Hardware uye GTX 1050 Ti mifananidzo, ine yakakwira-res matte skrini uye 94 Wh bhatiri, 1.9 kg / 4.2 lbs;
Huawei Matebook X Pro - Ultracompact zvese-zvinotenderera, Core U Hardware, yakakwira-res IPS inobata skrini ine 3: 2 factor ratio, minuscule bezels, TB3 ports, 57.4 Wh bhatiri, 1.32 kg / 2.95 lbs, yakanaka kukosha, asi inodhura kupfuura dzimwe nzira dzakawanda;
Lenovo IdeaPad 720s - yose-yakatenderera, inorema kupfuura iyo boka, Core U Hardware, inosarudzika Nvidia MX150 Max-Q mifananidzo, IPS matte skrini, madiki bezels, TB3 port, 56 Wh bhatiri, 1.5 kg / 3.4 lbs, inokwikwidza mutengo;
LG Gram 14 - diki-uye-mwenje kabhuku, Core U Hardware, Intel UHD 620 mifananidzo, IPS matte skrini, minuscule bezels, 60 Wh bhatiri, Ultra-mwenje pa0.99 kg / 2.19 lbs, mutengo wakanaka.
MSI Prestige PS42 - Ultracompact yose-yakatenderera, Core U Hardware, yakazara-simba Nvidia MX150 mifananidzo, IPS matte skrini ine madiki bezels, 50 Wh bhatiri, 1.2 kg / 2.6 lbs, inokwikwidza mutengo.
Izvi padivi, kana mutambo usati uri pane zvaunofarira zvinyorwa uye kutakurika chinhu chakakosha nzira, iwe unofanirwa kunyatsofunga izvo zviripo gumi nematatu sarudzo pamusika, pamwe nemamwe emabhizimusi akanaka asingatakurike ayo vamwe vandinosarudza sezuva nezuva-madhiraivha, kana bhajeti ichibvumidza, senge Dell Latitude 7490, Lenovo ThinkPad X1 Carbon kana Thinkpad T480s, iyo yatichavhara zvakadzama mune chimwe chikamu.
Dzimwe dzakanakisa 14-inch sarudzo: Huawei Matebook X Pro, Asus Zenbook UX430 uye Lenovo ThinkPad X1 Carbon
Sarudzo yeizere-saizi 15-inch multimedia notibhuku yakanyanya kunetsa, asi sarudzo zhinji dzinogona kupatsanurwa mumisasa miviri: Inotakurika / Isina Simba Simba uye Pasina Kutakurika / Yakawedzera Simba.
Kutanga tichafukidza edu ekurumbidza mune yaimbova chidimbu, dzakaonda-uye-dzakareruka 15-inch notibhuku inofambiswa neIntel Core U Hardware, iine kusimbisa pane compact fomu-chinhu, inotsvedza yezuva nezuva ruzivo uye hurefu hupenyu hwebhatiri, asi kwete akanakisa mapiki kana iwe uchimhanyawo anoda mabasa epamba nemitambo:
Acer Swift 3 15 - Core U Hardware, Nvidia MX150 mifananidzo, IPS FHD matte skrini, madiki bezels, esimbi kuvaka, 48 Wh bhatiri, 1.8 kg / 4.0 lbs, inodhura kupfuura dzimwe nzira zhinji;
Asus Vivobook S15 - Yakagadziridzwa vhezheni yeiyo VivoBook S510, Core U Hardware, inosarudzika Nvidia MX150 mifananidzo, IPS FHD matte skrini, diki bezels, kuvaka kwepurasitiki, 42 Wh bhatiri, 1.75 kg / 3.8 lbs, inokwikwidza mutengo.
Asus Zenbook UX533 - Core U Hardware, inosarudzika GTX 1050 Max-Q mifananidzo, IPS FHD matte kana UHD inobata Pantone skrini, zvidiki bezels, premium esimbi inovaka, 73 Wh bhatiri, 1.62 kg / 3.8 lbs, anodhura;
Dell Inspiron 15 7000 - Core U Hardware, inosarudzika Nvidia MX150 mifananidzo, IPS FHD matte kana UHD yekubata skrini, madiki bezels, epurasitiki anovaka, 42 kana 56 Wh bhatiri, 2.0 kg / 4.4 lbs, inokwikwidza mutengo.
LG Gram 15 - inotakurika, Core U Hardware, Intel UHD 620 mifananidzo, IPS FHD glossy isiri-yekubata skrini, diki bezels, esimbi kuvaka, TB3, 72 Wh bhatiri, 1.1 kg / 2.43 lbs, inokwikwidza mutengo.
Samsung Notebook 9 - inotakurika, Core U Hardware, inosarudzika Nvidia MX150 mifananidzo, IPS FHD glossy screen, diki bezels, magnesium kuvaka, 1x TB3, 75 Wh bhatiri, 1.3 kg / 2.8 lbs, pane kudhura;
Xiaomi Mi Notebook Pro - Core U Hardware, Nvidia MX150 mifananidzo, IPS FHD matte skrini, madiki bezels, esimbi kuvaka, 60 Wh bhatiri, 1.95 kg / 4.3 lbs, inodhura kupfuura dzimwe nzira zhinji.
Mimwe yeiyo 15-inch yakatetepa-uye-mwenje ese anotenderera: Dell Inspiron 7000, LG Gram 15 uye Samsung Notebook 9
Zvino, kana iwe uchida kuwana kakombuta ine simba kupfuura kugona kubata ese mashandisiro ezuva nezuva uye inorema mitoro, asi iyo yekutanga kuvaka uye yakatetepa fomu-chinhu ichiri pakati pezvinhu zvako zvakakosha, izvi zvakakwirira-kumagumo multimedia ultraportables inofanirwa kuve iwo ako :
Apple Macbook Pro - Core H Hardware, inosarudzika Radeon Pro 555/560 mifananidzo, 15.4 - glossy retina skrini, kuvaka kwealuminium unibody, 4x TB3 chiteshi, 84 Wh bhatiri, inotanga ku1.83 kg / 4.05 lbs;
Asus Zenbook Pro UX550 uye Zenbook Pro UX580 - Core H Hardware, inosarudzika Nvidia 1050/1050 Ti mifananidzo, 15.6 ″ matte kana kubata FHD / UHD skrini, ese simbi inovaka, 2x TB3 madoko, 71 Wh bhatiri, inotanga pa1.8 kg / 3.97 lbs yeiyo isiri-bata vhezheni, iyo UX580 tora yechipiri skrini mukati meiyo trackpad;
Dell XPS 15 - Core H Hardware, Nvidia 1050 Ti Max-Q mifananidzo, 15.6 - matte FHD kana kubata UHD skrini, simbi uye kabhoni fiber inovaka, 1x TB3, 56 kana 97 Wh bhatiri, inotanga ku1.85 kg / 4.1 lbs yeiyo isiri-yekubata vhezheni. Iine 56 Wh bhatiri;
HP Elitebook 1050 - Core H Hardware, Nvidia 1050 mifananidzo, 15.6 ″ matte FHD kana UHD skrini, aluminium unibody kuvaka, 2x TB3 uye mbiri-yekuchengetera, 96 Wh bhatiri, inotanga pa2.06 kg / 4.55 lbs yeiyo isiri-bata vhezheni ine 56 Wh bhatiri;
Lenovo ThinkPad X1 Extreme - Core H Hardware, Nvidia 1050 Ti Max-Q Graphics, matte FHD kana kubata UHD skrini, yakajairwa ThinkPad inotaridzika, maficha uye kuvaka, 2x TB3 uye mbiri-yekuchengetera, 80 Wh bhatiri, inotanga ku1.7 kg yeiyo isiri-yekubata vhezheni.
Uye mamwe eprimiyamu 15-inch sarudzo: Dell XPS 15, Asus Zenbook UX580 uye HP EliteBook 1050
Iwo akanakisa emitambo uye epamusoro-maitiro malaptop
Midziyo iri muchikamu ichi inokwanisa kubata mitambo uye zvimwe zvakawanda zvinoda mabasa epamba zvinoda zvine simba CPU neGPU. Isu takavaparadzanisa muzvikamu zviviri, izvo zvinopa kuita kwakanakisa kune yako bhuru, asi iine zvishoma fluff uye zvinoshamisira maficha, uye iyo nicer yakawanda compact sarudzo neazvino maficha, asi nemutengo unoenderana-ma tag.
Bang yesarudzo dzebhuru
Muchikamu chino hatisi kuzoita hanya nezvehukuru uye kutakurika, asi panzvimbo pezvo tarisa kukosha, mashandiro uye hunhu hwakanakisa hwatingawana kumari yedu. Kune akawanda akanaka misiyano iwe yaunogona kufunga, uye isu tinongotaura chete zvirinani sarudzo uye batanidzo kune edu akazara zvinyorwa uye ongororo yeakadzika-kuongorora.
Pakatenderedza $ 700 kusvika $ 900, pfungwa dzako dzinofanirwa kutendeukira kune Acer Nitro 5, Asus Vivobook Pro N580 uye TUF Kutamba FX505, Kana Lenovo Legion Y530, zvakakwana macomputer akazara-akazara neCore H uye GTX 1050 / 1050Ti mifananidzo, IPS skrini, backlit keyboards, IO chaiyo uye avhareji saizi mabhatiri.
Aya makomputa anokwanisa kubata mitero yemitero uye FHD yemitambo nepakati / yakakwirira magadziriso, asi iwe uchafanirwa kukwidza bhajeti kana iwe uri mushure mekugadziriswa neI7 processor, yakawanda RAM uye mbiri-yekuchengetera, uyezve tarisa mune ongororo kuti uwane kuti zvimwe nezvekuita kwechikamu chimwe nechimwe, zvinopisa uye akasiyana quirks. Iko kune yakaringana runyorwa rweGTX 1050 / 1050Ti malaptop mune ino yakatsanangurwa chinyorwa.
Mamwe emamwe ari nani bhajeti yemitambo malaptop: Asus TUF FX505, Acer Nitro 5 uye Lenovo Legion Y530
Pakatenderedza $ 1000 unogona kusvika kumalaptops eGTX 1060 ane hunyanzvi hwekubhejera, asi iwo musiyano wakachipa unosanganisira ma processor e5 ane RAM shoma, ane zvidzikiso zvishoma uye kwete hazvo kuita kwakanyanya kutonhorera kwerudzi urwu rweGPU. Midziyo inofarira iyo Lenovo Legion Y530, Dell Kutamba G7 kana Acer Aspire 7 inofanira kunge iri pane yako chinyorwa pano.
Iko kune zvakadaro zvirinani kukosha pakati pepakati chikamu chikamu cheGTX 1060 malaptop, ine nicer inovaka, inopenya skrini ne yakakwira-yekuvandudza mitengo uye madiki bezels, yakagadziriswa masisitimu, kutonhora kwakaringana uye mabhatiri makuru. Iyo Acer Predator Helios 300 uye Xiaomi Mi Kutamba ndedzimwe sarudzo dzinodhura pano, kana iwe unogona kukwira kumusoro kune iyo Lenovo Legion Y730, Alienware 15, Asus ROG GL504, MSI GE63 Raider kana zvimwe zviripo Clevo / Sager / Schenker asina-mapfupa. Zvizhinji nezve zvese izvi sarudzo mune ino chinyorwa.
Iwe unogona zvakare kutarisa mune iripo GTX 1070 malaptop kana iwe uri anofarira gamer, asi iyo 15-inch shanduro inodhura uye iyo chip inoita kunzwisisika mukati me17-incher ine imwe nzvimbo yekutonhora. Iwe unowana yakadzama rondedzero ye15 uye 17-inch GTX 1070 malaptop muno.
Kukosha kuri nani GTX 1060 sarudzo: Lenovo Legion Y730, Acer Predator Helios naAsus ROG GL504
Anotakurika 14 uye 15-inch mabhuku ekutamba emabhuku
Kana saizi uye huremu zvine basa uye urikuda kushandisa yakawandisa kune imwe inotakurika komputa, kune akawanda akanaka nicoptops ako iwe kunze uko.
Isu takafukidza nyaya iyi zvakadzama muchinyorwa chino, saka hatisi kuzozvidzokorora pano zvakare, ingo tevera chinongedzo chesarudzo dziripo nemazano edu. Mumashoko mashoma kwazvo hazvo, edu epamusoro mapiki panguva ino yazvino yekuvandudza ndiyo Gigabyte Aero 15X, Razer Blade 15 naAsus Zehpyrus M. Iwe uchazoona kuti sei uchibva pano.
Pamusoro pe izvozvo, urwu runyorwa rweanotakurika mabhuku emabhuku akavakirwa paNvidia's Max-Q yekuvakisa yakanyatsogadzirirwa matete-uye-mwenje mashandiro malaptops anogona zvakare kuuya anobatsira.
Isu takafukidza musoro uyu zvakadzama mu chakasiyana chakatsaurwa chinyorwa chaunofanirwa kutarisa kana iwe uchinyanya kufarira 2-in-1 laptop, asi isu tichataurawo zvirinani 14 uye 15-inch sarudzo ine inoshandurwa touchscreens muchikamu chino.
Pakati pepakati uye nemutengo unodhura unosvika pakusarudza pakati pezvishoma zvemidziyo yakavakirwa paCore U Hardware ine kana isina mifananidzo yakatsaurwa, FHD IPS touchscreens, epakati-chikamu anovaka, avhareji akaenzana mabhatiri uye akajairwa maficha. Aya ndiwo mapiki ari nani:
Acer Spin 5 - 15-inch inoshandurwa ine FHD yekubata skrini, dhizaini pani; Core U Hardware uye GTX 1050 mifananidzo, asi nenyaya dzekuita; 48 Wh bhatiri; zvakaringana chunky uye inorema, pa2.25 kg / 5 lbs; kukwikwidzana mutengo;
Dell Inspiron 15 7000 - 15-inch inoshandurwa ine FHD / UHD yekubata skrini. Core U Hardware uye inosarudzika MX150 mifananidzo; 42 kana 56 Wh bhatiri; yakagadziridzwa dhizaini uye inotakurika inotakurika, pa2kg / 4.4 lbs;
HP Mhanje x360 15 - 15-inch inoshandurwa ine FHD / UHD yekubata skrini, dhizaini pani; Core U Hardware uye inosarudzika MX150 mifananidzo, kana AMD Ryzen Hardware; 56 Wh bhatiri; compact esimbi inovaka, asi panzvimbo payo inorema pa2.17. pane kudhura;
Lenovo Flex 14/15 - 14/15-inch inoshandurwa ine FHD yekubata skrini, isina kudzikisira pani; Core U Hardware; 45 Wh bhatiri - 52Wh yeiyo 15-inch modhi; zvakakwana compact uye avhareji yemhando epurasitiki anovaka, asi mwenje pa1.7 kg / 3.7 lbs (14-inch modhi); kukwikwidzana mutengo;
Lenovo Yoga 730 - 15-inch inoshandurwa ine FHD inobata skrini, yepakati-yepamusoro pani; Core U Hardware uye GTX 1050 mifananidzo, asi nenyaya dzekuita; TB3; 52 Wh bhatiri; zvakakwana compact uye yakavakwa zvakanaka - 1.8 kg / 4.2 lbs; yemakwikwi akatemerwa mutengo.
Dzimwe dzesarudzo yepakati-tier: Acer Spin 5, HP Shanje x360 uye iyo Lenovo Flex 14
Kune rimwe divi, kana iwe uchikwanisa kushandisa yakawanda, pakakwirira-kumagumo iwe unowana zvakawanda zvinonakidza sarudzo ne premium anovaka, akakwira resolution skrini, zvine simba Hardware uye nifty maficha. Idzi ndidzo sarudzo dzekufunga nezvadzo:
Asus ZenBook Flip - 15-inch inoshandurwa ine FHD / UHD yekubata skrini, Pantone UHD pani; Core U Hardware uye GTX 1050 Max-Q mifananidzo; 57 Wh bhatiri; ultracompact uye yakavakwa zvakanaka, yakajeka mwenje pa1.9 kg / 4.3 lbs;
Dell XPS 15 2-in-1 - 15-inch inoshandurwa neFHD / UHD yekudhirowa, yakanaka mapaneru Core G Hardware uye Vega mifananidzo, kuita kwakanaka; inonakidza yakaderera-yekufamba keyboard; 2x TB3; 75 Wh bhatiri; compact, premium kuvaka - 2 kg / 4.4 lbs; zvinodhura;
HP Specter X360 15 - 15-inch inoshandurwa neHD touch screen, yakanaka pani; Core G kana Core U / MX150 Hardware, kuita kwakanaka; TB3; 84 Wh bhatiri; premium kuvaka, asi inorema pa 2.1 kg / 4.6 lbs; zvinodhura;
Bhuku reMicrosoft Surface 2 15 - 15-inch inokwenenzverwa neiyo yepamusoro-res 3: 2 skrini, N-trig digitizer, yakanaka pani; Core U Hardware uye yakasarudzika GTX 1060 mifananidzo mune base; keyboard yakakura; 86 Wh bhatiri; premium kuvaka - 1.9 kg / 4.2 lbs; inodhura kwazvo;
Lenovo ThinkPad X1 Yoga - 14-inch bhizinesi inoshandurwa ne FHD / WQHD skrini, yakanaka yepamusoro-res OELD pani; Core U Hardware; 2x TB3; 54 Wh bhatiri; yakanaka yekuvaka mhando uye compact fomu-chinhu - 1.4 kg / 3.2 lbs; zvinodhura;
Samsung Cherechedzo Pro 9 15 - 15-inch inoshandurwa ine FHD skrini, yakanaka pani; Core U Hardware; 54 Wh bhatiri; yakavakwa zvakanaka, asi kwete seyakanaka senge dzimwe sarudzo; compact uye chiyedza - 1.7 kg / 3.7 lbs; mutengo wakanaka.
Uye mamwe eprimiyamu 2-in-1s: Dell XPS 15 2-in-1, Microsoft Surface Book uye iyo Lenovo ThinkPad X1 Yoga
Anodhura ese anotenderera malaptop (pasi pemadhora mazana matanhatu)
Ichi chikamu chinosanganisira akanakisa makuru-skrini ese-anotenderera malaptop aunogona kuwana pasi pe $ 600, zvishandiso zvinokwanisa kubata mabasa ezuva nezuva uye kunyange mitambo, kune imwe nhanho. Tarisira kuti uwane zvakanaka tsananguro yemari, asi usatarisira kuti premium inovaka, hunyanzvi hwekugadzira kana hunhu.
Acer Chromebook 14 uye 15
Kana iwe uchida yakapfava, inokurumidza uye isingadhuri komputa yemabasa ezuva nezuva uye kunyanya Internet yakavakirwa zviitiko senge kubhurawuza, mabhaisikopo, mimhanzi, email kana kugadzirisa gwaro, iwe unofanirwa kufunga nezve aya maChbookbook.
The Acer Chromebook 15 ndiyo sarudzo inodhura kwazvo, kuenda madhora mazana maviri nemakumi mashanu kusvika mazana matatu emadhora. Rudzi urwu rwemari ruchakuwanira fanless Celeron Hardware chikuva, 250 GB ye RAM, 300 kusvika 4 GB yekuchengetera, 16-inch IPS FHD skrini uye riine diki 32 Wh bhatiri, zvakadaro zvakakwana kuti izvi zvienderere kwakatenderedza 15.6- Maawa matanhatu ekushandisa pane chaji. Ese aya akaputirwa mukati memuviri wakasarudzika unorema 32 lbs, iine akawanda emachiteshi kumativi, kumberi-akatarisana maspika uye yakanaka isina-backlit keyboard.
Iyo yakagadziridzwa vhezheni ine yakareruka uye yakareruka kuvaka uye yakagadziridzwa Hardware inowanikwawo, kune zvishoma pasi pe $ 400, asi kune vakawanda pane zvingangodaro zviri nani kukosha mune yakachipa musiyano. Tevedza iyi link kune rumwe ruzivo uye izvo zvazvino mitengo yekugadzirisa.
Pakazara, iyo Chromebook 15 ndeimwe yemalaptop akareruka ayo anoshanda chaizvo, sekureba sekunge iwe uchinyatsonzwisisa izvo Chromebook inogona uye isingakwanise kuita.
Iyo Acer Chromebook 15 inowana muviri unorema uye unorema wepurasitiki, asi hausi kuzowana inokwanisa yakazara-saizi laptop pasi pe $ 250
The 14-inch Chromebook chinhu chakaumbana uye chinowedzera mari. Iyo yazvino modhi inowana aruminiyamu chassis uye inotakurika kuvaka (inorema 3.4 lbs), yakagadziridzwa Hardware, iyo 48 Wh bhatiri iyo inotenderera yakatenderedza maawa masere kana kushandisa chaiko-kwehupenyu pakubhadharisa, backlit keyboard uye girazi trackpad, pamwe ne IPS FHD skrini ine sarudzo yekubata. Shanduro dzekare dzakakura tad uye hadziwane iyo backlit keyboard.
Iyo Acer Chromebook 14 inotanga pamadhora mazana matatu nemakumi matatu nemapfumbamwe, ichigadzira imwe yakanakisa kutenga kune avo vane bhajeti shoma, uye misiyano yekare inotengeswa pasi pemadhora mazana matatu. Tevedza iyi link kune rumwe ruzivo, mushandisi ongororo uye nemitengo yazvino.
Iyo yazvino 14-inch Acer Chromebook idiki uye zvirinani mavara
Anodhura ese-anotenderera malaptop
Ichi chikamu chinosanganisira yakazara-saizi Windows malaptop anotengesa pasi pemadhora mazana matanhatu uye anogona kubata mashandisiro ezuva nezuva, multitasking uye mimwe mitambo yekutamba.
Semutemo wenguva dzose, panguva yeichi positi ini ndinokurudzira kutenga laptop yakavakirwa pachangobva-chizvarwa Core i3 / i5 processor, 8 GB ye RAM uye kana zvichibvira, SSD yekuchengetedza. Iwe zvakare uchawana yakaenzana zvishoma pane zvishandiso zvine Pentium / Celeron processor uye ingori 4 GB ye RAM, asi iwo maCPU anononoka uye iyo huwandu hwe RAM haukwanisi zvakakwana kumabhurawuza azvino uno uye multitasking, ndosaka ndichikurudzira kuwana iyo Core i3 / i5 CPU uye 8 GB kana uchironga kuchengeta iyo laptop kwemakore mashoma. Kune zvakare mashoma dzinonakidza AMD dzinofambiswa sarudzo kunze uko kwekufunga, asi wakanangana nemuganhu wepamusoro wemutengo wechikamu chino.
Sekuenda kwekuchengetera, SSD ichaita kuti laptop yako ikurumidze kupfuura kana ikauya neHDD yenguva dzose, asi unogona kugadzirisa HDD kana gadziriso yeSSD iri kunze kwebhajeti rako, sezvauchakwanisa simudzira izvo mune ramangwana, kana uchida.
Nezvese izvi mupfungwa, ese makuru maOEMs anopa komputa muchikamu chino. Mukukomberedza $ 400 bhajeti iwe unowana Core i3 malaptop ane 8 GB ye RAM, HDD yekuchengetedza, HD skrini neTN mapaneru, panzvimbo payo mabhatiri madiki uye kazhinji asiri-akadzoreredza makhibhodi, mune zvishandiso senge iyo Lenovo IdeaPad 330, Acer Aspire E15 kana Dell Inspiron 15 3000 dzakatevedzana.
Pakatenderedza mamaki emadhora mazana mashanu unowana malaptop ane simba zvishoma neCore i500 Hardware, IPS screens uye backlit makhibhodi, ese ari maviri akagadziridzwa marongero emitsara yambotaurwa, asi zvakare mune zvishandiso senge Asus VivoBook akateedzana, Acer Aspire 5, Dell Inspiron 15 5000, Lenovo ThinkPad E akateedzana, ivo HP Pavilion 15 kana iyo premium Asus C302 2-in-1 Chromebook.
Uye zvakare kana iwe uchida kushandisa kutenderera madhora mazana matanhatu, padanho iri unowana malaptop ane akanaka uye madiki anovaka, makuru mabhatiri, SSD kuchengetedza, sarudzo Nvidia MX150 mifananidzo uye vashoma sarudzo neinoshandurwa inobata skrini.
Tevedza iyi link kune runyorwa rurefu rwemalaptop akanaka mu $ 500- $ 600 renji, nemitengo yakagadziridzwa uye ongororo dzemushandisi.
Ingori mamwe emalaptop akanaka anodhura kunze uko
Iwo akanakisa emabhuku ekunyorera uye emabasa
Mabhuku ekunyorera emabhizimusi angave ekushandira pamwe neane simba Hardware, akagadzirirwa anorema ekuremerwa pabasa, kana vese-vatenderi vane yakapusa aesthetics, yakasimba inovaka, akanakisa makiboodhi uye maficha senge vPro, TPM, LTE yekubatanidza uye zvigunwe-kuverenga. Izvi zvinonyanya kuitirwa nharaunda dzebhizinesi, asi iwe unozviona sevatyairi vemazuva ese futi, kana zvikaita zvaunoda uye zvikawira mukati mebhajeti rako.
Kune akatiwandei akasiyana mamodheru ekufunga pakati pemabhizinesi mazhinji ese-anotenderera, uye isu tawanyora pazasi. Isu tinonyanya kukurudzira 14-inch notibhuku mune ino chikamu, nekuda kwekuwedzera kwavo kugona uye kudzikisira huremu, asi mamwe eaya anowanikwawo ne15-inch skrini kana iwe uchingoda hombe kuratidzwa.
Asus Pro P5440 - mamwe mashoko - yakatetepa-uye-yakajeka laptop ine MIL-graded magnesium inovaka, yakaisvonaka keyboard, matte IPS skrini, punchy vatauri chiitiko chekubata zviitiko zvezuva nezuva. Inowana 50 Wh bhatiri, izere IO (isina TB3 kunyange) uye inotengeka kupfuura mutengo.
Lenovo ThinkPad X1 Carbon - mamwe mashoko - ongorora - iyo X1 Carbon ine iyo inotaridzika, iyo yekuvaka mhando, iko kuita, iyo keyboard uye skrini inodiwa kubva kumusoro-kwe-iyo-iyo-mutsetse ultrabook. Chizvarwa chazvino chinowana echinyakare fomu-chinhu ine mutete-uye-mwenje 14-inch muviri, compact bezels uye huremu hwakazara hwe2.5 chete lbs. Shanduro dzekare dzaive 2-in-1s, izvo zvino zviri maficha eiyo ThinkPad X1 Yoga mutsetse. Iwe uchafanirwa kuita mashoma kwazvo kukanganisika neaya malaptop, uye iyo yakatemwa IO uye panzvimbo pevanyarikani vatauri vaviri vacho. Iyo X1 Carbon zvakadaro inodhura, iine base base yekumisikidza inotanga panosvika madhora mazana maviri nemazana mashanu nemakumi mashanu emadhora uye beefier shanduro dzichiswedera padyo ne $ 1250- $ 1700.
Lenovo ThinkPad T480 - mamwe mashoko - iyi Lenovo yakajairwa clamshell bhizimusi kabhuku uye inosunga iyo Hardware uye maficha iwe aunotarisira kubva kubasa-komputa, pamwe hombe kusvika kuna 96 Wh bhatiri. Iyo T480 iri zvishoma chunkier uye inorema kupfuura dzimwe sarudzo mune iyi sarudzo, kutanga uye 3.5 lbs uye kuenda kune angangoita 4 lbs yeiyo 96 Wh bhatiri musiyano, asi zvakare inodhura, kutanga kutenderedza madhora mazana masere emamodeli ekutanga.
Lenovo ThinkPad T480s - ongorora - iyo inotakurika vhezheni ye T480, inorema 2.95 lbs, inowana 57 Wh bhatiri, yakatetepa uye inotanga pa $ 1200.
Dell Latitude 14 7000 - mamwe mashoko - Imwe nzira yaDell yemitsetse yeLenovo T400, malaptop aya anogadzirisika uye epamusoro mamodheru anosanganisira akajeka eFHD skrini ane matte IPS mapaneru, yakanaka IO, yazvino Intel Core U Hardware uye 60 Wh bhatiri. Iwo ekupedzisira ari padivi rine mutengo munzvimbo zhinji.
HP EliteBook Folio 1040 akateedzana - mamwe mashoko - dhizaini dhizaini kubva kune mamwe akawanda malaptop ebhizinesi, aya anowana kuvaka kwealuminium unibody, asi neyakafanana mhando yekuvaka uye kusimba. Iwo zvakare aripo akawandisa masisitimu uye anosanganisira yakanakisa keyboard, akawanda matte kana ekubata skrini sarudzo, yemazuva ano Core U Hardware uye 67 Wh bhatiri mune compact shell inorema kutenderedza 3.2 lbs. Iyo EliteBook Folios iriwo padivi rine mutengo.
Iwe unofanirwa zvakare kutarisa iyi posvo kune dzimwe sarudzo pa bhizinesi ultrabooks neyemukati 4G / LTE yekubatanidza.
Mamwe emabhizimusi sarudzo: Lenovo ThinkPad T480s, Dell Latitude 7000 uye HP EliteBook 1040
Kusvika pakuenda kunzvimbo dzekushandira, kurudziro yedu yesarudzo dzakatetepa-uye-mwenje nema processor ekukurumidza (kusvika kuCore i9 uye Xeon) uye nyanzvi giredhi Nvidia Quadro mifananidzo inotevera:
Dell Precision 5000 - yekushandurwa musiyano weiyo Dell XPS 15, iine Intel Xeon processor, 32 GB ye RAM uye Nvidia Quadro P2000 mifananidzo;
Lenovo ThinkPad P1 - 15-inch laptop ine 100% aRGB 4K inoratidzira, inosvika kune Intel Xeon processor, 64 GB ye RAM uye Nvidia Quadro P2000 mifananidzo;
MSI-WS65 - workstation musiyano we MSI GS65 Thin, ine yakafanana kuvaka uye hunhu, asi kumusoro Core i9 processor, 32 GB ye RAM uye Nvidia Quadro P4200 mifananidzo.
Ikoko iwe unayo, aya ndiwo mamwe akanakisa 14 uye 15 inch ultrabooks iwe aunofanira kufunga nezvemazuva ano. Ivo vakaonda uye vakareruka kupfuura vazhinji akajairwa malaptop, ivo vanopa iko kuita kunodiwa nemabasa ako ezuva nezuva uye zvimwe (multimedia, mitambo, inoda software), uye vanopedza kwemaawa akati wandei pamutero wega wega.
Iwe une zvakawanda zvekusarudza kusarudza kubva, uine kana pasina touchscreens, uine kana isina yakatsaurwa mifananidzo, ine premium metallic miviri kana anodhura emutengo mateki. Saka kana iwe uchida imwe yeaya makuru-fomati ultrabooks, iwe unofanirwa kuwana imwe mune ino chinyorwa.
Ndiri kugara ndichivandudza iyi runyorwa rweakanakisa 14 uye 15-inch ultraportable uye ndiri zvakare pano kupindura kumibvunzo yako uye kukubatsira iwe munzira ipi neipi inogoneka, saka kana iwe uchida kubvunza chimwe chinhu kana kuwedzera kune iyo posvo, tora mukubata muchikamu chemashoko pazasi.
Filed Under: 2018 kusimbisa kubva windows 7 to windows 10